ပြန်လာပါလို့ ပြောပြန်ပြီလား…ဦးသိန်းစိန်ရယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြန်လာပါလို့ ပြောပြန်ပြီလား…ဦးသိန်းစိန်ရယ်
Posted by phone_kyaw on May 13, 2012 in Copy/Paste |9comments
အခုတော့ဗျာ….မြန်မာပြည်က ဗီဇာရဖို့ အတွက် ဖြည့်ရတဲ့ဖောင်၊ ငွေလိုက်တဲ့ငွေ၊ စောင့်လိုက်ရတဲ့ အချိန်ကာလ၊ သံရုံးကို ဆက်လိုက်ရတဲ့ဖုန်းခတွေသာပေါင်းကြည့်ရင် ဗီဇာရတာနဲ့ တောင် မတန်ဘူး။
ဒီစနစ်တွေကို ပြောင်းနိုင်ရင်တော့ သမတရဲ့ ပြန်လာပါဆိုတဲ့စကားက သဲထဲရေသွန်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့….ဦးသိန်းစိန်။
ဒါဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို မပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့။
ဦးသိန်းစိန် ပြောတဲ့ ပြန်လာပါ ဆိုတာက ” မြန်မာပြည် ကို အပြီးပြန်ပြီး အလုပ်လုပ်ပေးကြဖို့” ခေါ်တာနေမှာပါ။ :-)
ဗီဇာရလို့ ကိုဘုန်းကျော် က နိုင်ငံခြားသား အနေနဲ့ ဝင်တာ ဆိုလို့ ကတော့
မြန်မာနိုင်ငံသား အနေနဲ့ ဝင်တာထက် ပိုပြီး အချိန်ကုန် သက်သာမှာပါ။
သူများတိုင်းပြည်မှာတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ ကိုပြန်ဝင်တာ ချက်ခြင်းဖြတ် ကနဲဘဲ။
ကျွန်မတို့ ဆီမှာတော့ နိုင်ငံသားလိုင်းမှာ တန်းစီနေရတာ ကို အကြာကြီးဘဲ။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကိုယ့်ပြည်ပြန်အဝင် ကို ဘဲ စစ်လိုက်ဆေးလိုက်တာ။
၁၀နှစ် ကလေး ကို အလုပ်မလုပ်ကြောင်း ထောက်ခံစာမပါလို့တဲ့။ တကဲ့ဟာသဘဲ။
လိုအပ်လို့ ဆိုရင် ကျွန်မတို့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ အစစ်ခံပါတယ်။
မဟုတ်တာကို ကပ်ရစ်နေတာကတော့ ပြင်ဖို့ကောင်းပြီ။
ဟုတ်တယ် အရီးလတ်ရေ့ …
မောင်ဂီ့ ပြန်ခါနီးတိုင်း
ဆံပင်မညှပ် မုတ်ဆိတ်မရိတ် …
သွားလေသူကြီးလို ၀တ်ပြီး လေယာဉ်စီး ..
အဲ့ဒါ အကျင့် စွဲနေပြီ
ထိပ်ဆုံးနှစ် လူရည်သန့်လေး ပေါ့ ..အဟတ် ..
ရစ်လိုက်တာ ဆိုတာများ …မှားပါတယ်…
ကိုယ်ကပဲ သူများတိုင်းပြည် သူခိုးဂျပိုး သွားလုပ်နေတဲ့အတိုင်း..
အဲ့ …သူခိုးဂျပိုးရုပ်နဲ့ ပြန်လာတော့မှ … မရစ်တော့ဘူး…
ဟ… ဒီငတိ သည်လောက် ထီမထင်တဲ့ သောက်ချိုးနဲ့ဆိုရင်
ဘယ်သူနဲ့ သိတာလား ..ဘာအကန့်ကောင်းတာလားနဲ့ …
သို့လော သို့လောတွေ ဖြစ်ပြီး မရစ်ရဲတော့တာ …
ဒါတောင် ပြန်ထွက်ဖို့ ဒီဖောင်လုပ်ရင် သူ့အသိ အင်တာနက်ဆိုင်
သုံးပါ ဆိုပြီး အမိန့်လိုလို ..သြဇာလိုလို ဗစ်ဇင်းတင်း ကတ် လာထိုးပေးသေး….
သူ့ရှေ့တင် အဲ့သည့်ကတ် စုတ်ဖြဲပစ်လိုက်သေး …
အော် ..ရယ်… လူ့အခွင့်အရေး …
ခင်များ ပြန်လို့ ရအောင်. သုဘရာဇာဆီ လက်မှတ်သွားထိုးပါ
အာပာအာပာ တတ်လိုက်တဲ့ပြသာနာ ဖိန့်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင် မွဲလိုက်တာတဲ့ပြာတေ ၀ိုင်းလိုက်တဲ့အကြွေး
စုတ်လိုက်တဲ့ ပလက်ဖောင်း ကျပ်လိုက်တဲ့ဒိုင်နာ လိမ်လိုက်ကျတဲ့လူတွေ…………….အင်းတားတားတော့ကိုကိုကြီး ဂိ့ဂိ့ ဂိ့ဆီက ပိုက်ပိုက်ချေးပြီးဒိုးတော့မယ် America ကို “Need Cash for Alcohol Research” ဆိုပြီး သူဖုန်းစားလုပ်ပြီး လေဘာတီကျောက်၇ုပ်အောက်မှာပဲ နှပ်တော့မယ် ………………….Blue Label
ပျံသာ ပျံခဲ့ပါ၊ (ဒီအတိုင်း ပြန်လာလို့ မရဘူးဆိုရင်ပေါ့နော့။)
နင့်ဗီဇာဖောင်ဂို pending တုံးထုလိုက်ဒါ ငါဘဲကွ… အဂုဘာတတ်နိုင်သေးလဲ…။ ညှင်း ညှင်း ညှင်း..။
ဩစတေးလျသံအမတ်ကြီးအိမ် မီးဖိုချောင်လုံခြုံရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်ကြောင်ကြီး :cool:
မလုပ်ပါနဲ့ ဗိုလ်ကြောင်ကြီးရယ် သူက မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး အတိုက်အခံပါတီဖွဲ့ရဦးမှာ။
တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက် ဗီဇာပေးလိုက်ပါ နော် ဟော် ဟော်……………